သန့် ရှင်းစွာ ဖြေဆိုရင်း အောင်ပွဲဆင်နိုင်ကြပါစေ သောဝ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » သန့် ရှင်းစွာ ဖြေဆိုရင်း အောင်ပွဲဆင်နိုင်ကြပါစေ သောဝ်
သန့် ရှင်းစွာ ဖြေဆိုရင်း အောင်ပွဲဆင်နိုင်ကြပါစေ သောဝ်
Posted by အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ/ သန်းထွဋ်ဦး on Feb 21, 2012 in Education | 18 comments
စာမခိုးချကြပါနဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြေတော့မယ် ရိုးရိုးကျင့်မြင့်မြင့်ကြံကြပါစို့ 
အောင်မြင်တဲ့ ကျောင်းသားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ငယ်စဉ်ကျောင်းသားဘဝထဲကလုံ့ လစိုက်ကြိုးစားရမှာ
ပါ။ပထမ အရေးကြီးဆုံးကတော့အတန်းစဉ် နားလည်တတ်ကျွမ်းစွာ စာမေးပွဲအောင်ရမှာပေါ့။ပေါ့ပေါ့နေပြီး စာမေးပွဲတပွဲထိုးအောင်ရင်လည်းဘဝမှာအရေးပါအရာရောက်တဲ့လူငယ်တွေဖြစ်နိုင်မယ်မထင်ပါ။
(Repetition)၊စာများကိုပြန်လည်စစ်ဆေး၊ဆန်းစစ်မယ်(Recall)ဆိုတဲ့ 3R ကိုလက်တွေ့ လုပ်ဆောင်
ရင် စာမေးပွဲဆိုတာ ဘဝမှာဆူးညှောင့်ခလုတ်သေးသေးလေးပါ။
ခေတ်တွေဘယ်လို ပြောင်းပြောင်း၊ဒီမိုကရေစီခေတ်၊အစိုးရသစ်နဲ့ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာ
မပြောင်းလဲနိုင်သေးတာတွေအများကြီးထဲက တစ်ခုကမကြာမီလာတော့မယ့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲကြီး
ပါ။တခြားမြို့ တွေ၊ရွာတွေက ကျောင်းတွေတော့ ထဲထဲဝင်မသိပေမယ့် ကိုယ်သိထားတဲ့ စိတ်ပျက်မိတာလေး
လာမည့် မတ်လ(၁၂)ရက်နေ့ မှာ စတင်ဖြေကြားတော့မယ့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲကြီးကို ဒီနှစ်လဲ
စာခိုးပွဲကြီး ရယ်လို့ ထပ်ခေါ်ရအုံးမယ်ထင်တယ်ဗျာ။စစ်သမျှစာမေးပွဲတိုင်း နှစ်စဉ်လိုလို ခိုးကူးနေကြတဲ့
ကျောင်းသားတွေ၊ခိုးကူးနေတဲ့ကျောင်းသားတွေကို အားပေးနေတဲ့ မိဘနဲ့ ကျောင်းကဆရာ၊ဆရာမတွေ နှစ်စဉ် စိတ်ပျက်ပျက်နဲ့ တွေ့ လာရတာ နာကျဉ်းလာပီဗျာ။
အဲဒီထဲမှာအဆိုးဆုံးအနေနဲ့ က စာဖြေခန်းတွေကိုအပိုင်ဝယ်သလို ဝယ်လို့ ရနေခြင်းပါ။ဘယ်လူကြီးရဲ့ သား
သမီးနဲ့ ဘယ်ကသူဌေးသူကြွယ်သားသမီးတွေဖြေမှာမို့ ပါလို့ ကြားခဲ့၊မြင်ခဲ့ရတာလဲ မနည်းတော့ဘူးလေ။
အရိုးသားဆုံးနဲ့ အသန့် ရှင်းဆုံးဖြေကြပါဗျ။မအောင်လဲ နောက်တစ်နှစ်ကြိုးစားပေါ့ဗျာ။လွယ်လွယ်ရတဲ့ အ
လွယ်လမ်းမှာ အနာဂတ်ရဲ့ ကလေးသူငယ်တွေ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို ဆွဲထုတ်ကြမလဲ။
ဘဝလမ်းမှာ တဆင့်တက်လှမ်းစရာခုံလေးဖြစ်တဲ့ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းမှာ စာခိုးချဖြေတယ်။အောင်သွားတယ်။
ခုလိုပြောလိုက်လို့ အံ့သြသွားတယ်မဟုတ်လားဗျာ။မယုံမရှိပါနဲ့ ဗျာ ဆယ်တန်းအဆင့်လေးကဘဲ စာခိုးကူး
တတ်တဲ့ ကျောင်းသားတွေက ဆေးတက္ကသိုလ်ရောက်တော့လဲဆက်ပြီးခိုးချပါတယ်(ဆေးတက္ကသိုလ်ရဲ့ အိမ်
သာအများစုမှာ micro စာရွက်တွေနဲ့ ပြည့်နေတယ်)ကျနော့်ကိုယ်တွေ့ ပါ။
အင်ဂျင်နီယာလုပ်မယ့် GTI ကျောင်းသားတွေစာခိုးချတယ်။ဆရာဆရာမအသစ်တွေ entrance ဖြေတော့
ကူးချတယ်၊မရနိုင်မှာစိုးလို့ အိမ်တွေဆီ အထုပ်အပိုးနဲ့ လိုက်ရတော့တယ်။
အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ဘာဆက်လုပ်ရင်ကောင်းမလဲဗျာ။စာခိုးချနေသူတွေကို ဆက်ပြီး အားပေးနေမယ်ဆို
ရင်တော့ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည် မှောက်ရချည့်ဗျာ။
ယနေ့ ချိန်မှာ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြေဆိုတော့မယ့် ကျောင်းသားလေးတွေကို ကျနော်က လက်ဆောင်ပေး
ဘဝဆိုတာက ခဏတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ်သန့် ရှင်းစေချင်တယ်။ငယ်ရွယ်စဉ်မှာရှိတဲ့နုနယ်တဲ့
စိတ်ထားဟာ နောင်မိမိရောက်နေတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေသော ရင့်ကျက်မှုဖြစ်နေသင့်တယ်။
ယခုဖြေဆိုတော့မယ့် စာမေးပွဲကြီးအပါအဝင်၊နောင်ဆက်ရှိလာအုံးမယ့် ဘဝစာမေးပွဲများကို သန့် ရှင်းစွာဖြေ
ဆိုကြရင်းနဲ့ ဘဝရဲ့ အမြင့်တစ်နေရာမှာ ကျနော်တို့ ဆုံကြမယ်ဗျာ။
အဲဒီ့ပြသနာကို ရှင်းဖို့ဆိုရင် မိဘတွေကနေစရမှာ။ ရိုးသားဖြူစင်ခြင်းဟာ ဂုဏ်ယူစရာကောင်းတယ်ဆိုတာ ခလေးတွေကို သိအောင်ပြောပြရမယ်။ ရှက်သင့်တာကိုရှက်ပြီး…မရှက်သင့်တာကို မရှက်ဖို့လည်း လမ်းကြောင်း ပေးရမယ်။ နောက် မူလတန်း အလယ်တန်း ကျောင်းသင်ခန်းစာတွေမှာ ပြည်သူ့နိတိ လိုမျိုးတွေ ပြန်ထည့်ပေးရမယ်။ နောက် အဲလိုခိုးချတဲ့ ခလေးတွေကို အအောင်မပေးပဲ ထားရမယ်။ (၁၀ တန်းမှ မဟုတ်ဘူးနော်) ခိုးချတဲ့ကျောင်းသားမှန်သမျှ စာမေးပွဲကျတယ်ဆိုရင် ဘယ်ခလေးမှ ခိုးချမယ်မထင်ဘူး။ ( Green Rose လည်း ပြည်သူ့နိတိဆိုတာ မသင်ဖူးခဲ့ပါဘူး။ အဘိုးရဲ့ စာအုပ်စင်မှာ တွေ့လို့ ဖတ်ကြည့်ခဲ့ဖူးတာ။ ) Green Rose တို့ ငယ်ငယ်က ဂျာနယ်ကျော်မမလေးရဲ့ “သူလိုလူ” , ခင်နှင်းယုရဲ့ ” မောင်မျိုးမင်းနိုးကြားလာခြင်း” လို စာအုပ်မျိုးတွေနဲ့ ရင်းနှီးခဲ့ရတာ။ အမေတို့က စာအုပ်စင်မှာ Green Rose တို့ ဖတ်သင့်တယ်လို့ထင်တဲ့ စာအုပ်မျိုးတွေကို သပ်သပ်ထားပေးထားတာ။ တခြားအပြင်ကစာအုပ်တွေကို ပေးမဖတ်ဘူး။ ငယ်ငယ်ကတည်းက အရိုးစွဲခဲ့တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေက ဘ၀ တစ်လျှောက်လုံးကို ပါလာပါတယ်။ အခုခလေးတွေအတွက် အဓိက အကျဆုံး အရေးအကြီးဆုံး ပြသနာက စာမဖတ်ကြတာပါ။ ဖတ်သင့်တာတွေ မဖတ်ခဲ့ကြရတာပါ။ ကျောင်းစာကြည့်တိုက်တွေ ဖွံ့ဖြိုးဖို့ လိုပါတယ်။
အခုက ခလေးတစ်ယောက်ယောက်ကို ခိုးမချဖို့ ပြောဖို့တော်တော်ခက်တယ်။ သူကခိုးမချရင် ခိုးချတဲ့ လူတွေရဲ့နောက်မှာ ကျန်ခဲ့မှာကိုး။
Green Rose ငယ်ငယ်က စာခိုးမချခဲ့ဘူး။..သူများပြရင်တောင်မှ မကြည့်ဘူး.. ဒါပေမယ့် တက္ကသိုလ် တက်တုန်းမှာ ၁ ခါ ခိုးချခဲ့ဘူးတယ်။ စာရလို့ မရလို့ထက်.. လုပ်ကြည့်ချင်ခဲ့တာ။ အဲဒီ့တုန်းက အဆောင်မှာ အမတွေက စာခိုးချဖို့ကို ကြိုးစားပမ်းစား လေ့ကျင့်နေကြတာကို ကြည့်ပြီး လိုက် လုပ်ကြည့်မိတာ။ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ဆရာမတွေ မမြင်အောင် ခိုးချနိုင်ခဲ့တာကို ပျော်နေခဲ့တာ။ ဆိုလိုချင်တာက လူငယ်ဆိုတာကိုပြောပြတာပါ။ အတုခိုးသိပ်မြန်တယ်လေ…စွန့်စားရတာကိုလည်း သဘောကျတတ်ကြတာ။ Green Rose ဆိုရင် မကောင်းမှန်းသိသိကြီးနဲ့ လုပ်ခဲ့တာ။ အခုခလေးတွေကိုတော့ တော်တော်ပြုပြင်ယူရမယ်။ အခုက ခိုးချတယ်ဆိုတာ ရှက်စရာလို့ မထင်ကြဘူးလေ။ ခလေးတွေရဲ့စာရိတ္တကို ပြင်ဖို့ဆိုရင် ငယ်စဉ်ကတည်းကပြင်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။ ၁၀ တန်းကျောင်းသူ ကျောင်းသားအရွယ်မှာ စာရိတ္တမကောင်းလို့ ဆရာ၊ဆရာမက ပြင်းထန်တဲ့ အပြစ်ပေးခဲ့ရင် အန္တရယ်များပါတယ်။ ရုပ်ဝထ္ထုတွေ မပြည့်စုံတာထက် အကျင့်စာရိတ္တချွတ်ယွင်းတာက ပိုပြီး ရှက်စရာကောင်းတယ် ဆိုတာ ခလေးတွေနားလည်အောင်ပြောပြရမှာပါ။
ကျောင်းစာမေးပွဲမှာ စာခိုးချတဲ့ ကိစ္စကတော့ ဆရာ၊ဆရာမတွေ နဲ့ တိုက်ရိုက်ပတ်သတ်ပါတယ်။ (တပည့်မကောင်း ဆရာ့ခေါင်းလေ)
Green Rose ငယ်ငယ်က စာခိုးမချခဲ့ဘူး။..သူများပြရင်တောင်မှ မကြည့်ဘူး.. ဒါပေမယ့် တက္ကသိုလ် တက်တုန်းမှာ ၁ ခါ ခိုးချခဲ့ဘူးတယ်။ စာရလို့ မရလို့ထက်.. လုပ်ကြည့်ချင်ခဲ့တာ။ အဲဒီ့တုန်းက အဆောင်မှာ အမတွေက စာခိုးချဖို့ကို ကြိုးစားပမ်းစား လေ့ကျင့်နေကြတာကို ကြည့်ပြီး လိုက် လုပ်ကြည့်မိတာ။ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ဆရာမတွေ မမြင်အောင် ခိုးချနိုင်ခဲ့တာကို ပျော်နေခဲ့တာ။ ဆိုလိုချင်တာက လူငယ်ဆိုတာကိုပြောပြတာပါ။ အတုခိုးသိပ်မြန်တယ်လေ…စွန့်စားရတာကိုလည်း သဘောကျတတ်ကြတာ။ Green Rose ဆိုရင် မကောင်းမှန်းသိသိကြီးနဲ့ လုပ်ခဲ့တာ။
ခုလိုထိမိတိကျတဲ့ ကွန်မန့် လေးပေးတဲ့ Green Rose ရေ ကျေးဇူးပါခင်မျာ။စာခိုးချဖူးတယ်လို့ ဝန်ခံရဲတဲ့သတ္တိကိုလေးစားအားကျပါတယ်။
ကျနော်ဘဝမှာပထမဆုံးစာကူးချမလို့ ကြံစည်ဖူးတယ်ဗျာ။ဗလာစာရွက်မှာကြိုရေးပြီး အိတ်ထဲထည့်သွားတာ။ဒီစာရွက်ကြောင့် အမူအရာ
ပျက်နေတဲ့ ကျနော်နားကို ဆရာရောက်လာပြီး ဘာဖြစ်နေတာလဲမေးတော့ အဲစာရွက်ကျနော်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။စာမေးပွဲမှာလဲ အဲဒီ
အကြောင်းအရာပါနေတယ်ဗျ။ဒါပေမယ့် ငါမရလဲမရေးဘူးဆိုတဲ့ စိတ်ဒုံးဒုံးချပြီး တခြားရတဲ့စာတွေကြိုးစားပြီးရေးခဲ့တယ်။ကျနော်လဲ
စာမေးပွဲကျဖူးတယ်။ဆပ်ပလီထိဖူးတယ်။ဒါပေမယ့် ဘယ်တော့မှစာခိုးချတဲ့ အလုပ်မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။Green Rose ပြောသလိုပေါ့ ဆရာတွေရော၊
ကလေးတွေအတွက်ပါ ကျနော်တို့ ကြိုးစားထောက်ပြ ပြုပြင်ကြရတော့မယ်။
သင်ကြားနည်းစနစ်တွေပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ခိုးချတဲ့ပြသနာဟာအတော်အတန်ရှင်းသွားမှာပါ။ အလွတ်ကျက်စနစ်ကိုအရင်တိုက်ဖျက်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ နောက်ပြီးအတန်းထဲမှာစာကိုတခါတည်းနားလည် သဘောပေါက်အောင်ဆရာဆရာမတွေစေတနာပါပါနဲ့တာဝန်ယူရှင်းပြရပါမယ်။ ပညာပြခန်းတွေကို လည်းလျှော့ ချလိုက်မယ်ဆိုရင် ခိုးချခြင်းကင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အခုဟာကစာတ ပုဒ်ကိုနားလည် သလိုကိုယ့် စကားနဲ့ပြန်ရေးရင်အဲကလေးကကျရော။ ၏သည်မရွေးဖြေရ မယ်ဆို တဲ့စနစ်က ခိုးချဖို့ကိုတွန်း အားပေးစေပါတယ်။ ကိုယ့်စကားနဲ့ကိုယ်နား လည်သ လိုရှင်းပြဖြေဆို ခွင့်ပေးမယ်။ စာကိုနားလည်အောင် သင်ပြီး မေးခွန်းကို ဖတ်စာအုပ်ထဲ ကအတိုင်း၏သည်မရွေးမဟုတ်ပဲ နဲနဲပြုပြင်ထားမယ် ဆိုရင်ဘယ်လို လုပ်ခိုးချလို့ရတော့ မှာလဲ။ ကျောင်းသားကိုတော့ ခိုးမချနဲ့ လို့ပြောလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ခိုးချလို့မရတဲ့စ နစ်ကိုချမှတ်ထားမယ်ဆိုရင် ဒီပြသနာဖြေ ရှင်းပြီး သားဖြစ်မှာပါ။ တခါကပေါ့။ တက္ကသိုလ် တခုမှာကျောင်းသားတွေကအလွတ်ကျက်စနစ်ဆိုတော့ သင်္ချာကိုတောင်အလွတ်ကျက်ကြပါတယ်။ ဘယ်လောက်ကျက်လဲဆိုရင်တွက်နည်းရော ဂဏန်းရော အဖြေရောတပုဒ်လုံးအလွတ်ကျက်ပါတယ်။ စာမေးပွဲမှာလဲပါပါတယ်။ မေးခွန်းက လဲကြိုအောက် ထားတာကိုး။ ကျောင်းသားတွေကမေးခွန်းသေချာမဖတ်ပါဘူး။ ကျက်ထားတဲ့အတိုင်းတွက်နည်းရော ဂဏန်းရော၏သည်မရွေးဖြေပါတယ်။ ကျပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပုဒ်စာတူပေမဲ့ ဂဏန်းတွေလွှဲ ထားလို့ပါ။ ဖြေပုံမှန်ပေမဲ့အဖြေတွေအားလုံးမှားပါတယ်။ ဒီလိုစနစ်တွေပြင်ဖို့လိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် စာမေးပွဲကျပါတယ်။အပြင်မှာအောက်ထားတဲ့ မေးခွန်းမှာပါတဲ့ နံပါတ်လေးကို အပြောင်းအလွဲ
လုပ်မေးတဲ့။မဖြေနိုင်ဘူး ကျပါတယ်။ဒီတော့ အားလုံးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ လိုပါပီ
အခန်းကိုဝယ်လို့ ရတာလဲ ခုမှသိတယ်..
ကျနော်တို့ ဆယ်တန်းတုန်းကတော့ မခိုးချပါဘူးဗျာ
ဘေးက အမကြီးကို မေးပဲ မေးခဲ့တာ
ခိုးချဖို့ ဟာယူသွားတာ ဒူးတုန်နေတာနဲ့ရထားတဲ့ဟာတောင် ပြန်မေ့တယ်..
ကိုစိန်ပေါက်ပေါက်ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ လက်ဆောင်ပါဗျာ။ပြန်မန့် ပေးလိုက်ပါတယ်။
Yes. I think, we have to change the whole education system not only for testing but also teaching method too.
သို့ ကိုကြီး ahnyartamar ခင်များ။သားသားကရေးမပေးနိုင်လို့ အင်္ဂလိပ်ထိမိတဲ့ကွန်မန့် လေးအတွက်ကျေးဇူးတင်
သို့ ကိုဂီခင်များ။အကို့ ရဲ့ 3Shu ကလဲမှတ်သားစရာပါဘဲဗျာ။ဒါမျိုးလေးတွေများများရေးဖို့ တိုက်တွန်းတာရယ်၊မကောင်း
ပေမယ့် အောင့်ပြီးဖတ်ပေးလို့ ကျေးဇူးနော်။
ကိုအံစာတုံးရေ။ခုချိန်မှာ အားတစ်ခုရစေတယ်လို့ရင်ဖွင့်ပေးလို့ ကျေးဇူးပါ။
ကိုဖရဲခင်များ။ကျရှုံးခြင်းနဲ့ အောင်မြင်ခြင်းဟာ ကျောခြင်းကပ်လျှက်မို့ တခါတရံနီးလျှက်ဝေးနေတတ်ပါတယ်။အရသာ(၂)
မျိုးလုံးခံစားဖူးတယ်ဆိုတော့ အတွေ့ အကြုံရတော့ပေါ့ဗျာ။
ကျနော့် စိတ်ထဲမှာလဲ တကယ်ဖြစ်စေချင်တာက ယနေ့ ကလေးတွေကို တကယ်တတ်အောင်သင်မယ်၊ဘယ်လောက်နားလည်
သလဲ ပြန်လှန်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင် အောင်မြင်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
မသဲနုအေး ပြောသလိုပေါ့ ခိုးကျလို့ မရတဲ့ စနစ်တစ်ခုကို ကျနော်တို့ အစိုးရပြောင်းလဲဖို့ စဉ်းစားသင့်ပီ။
ပြောင်းလဲပေးဖို့ လဲ တိုက်တွန်းပါရစေ။
အားလုံးသော ရွာသူ၊ရွာသားများ ဆရာသမားများ၏ ထင်မြင်ချက်အား စောင့်မျှော်လျှက်ပါ။
3R ကို ကြိုက်တယ်ဗျို့ ….
ကျောင်းတော်သူကျောင်းတော်သားတွေအတွက် ကျနော်က 3Shu နဲ့ အားဖြည့် ပြီး ပါ့မယ်ဗျ…
ဒါမျိုးလေးတွေ များများရေးပေးဖို့ နှိုးဆော်ပါရဲ့ဗျာ
ဒါလေးတွေက အရှေ့ကျွန်း ပညာရေးလောကမှာ သုံးလေ့ရှိတာပါ…
1. Yoshu ကတော့ ယနေ့ ဆြာ သင်မယ့်စာ(အခန်း) စသည်ကို ကြိုတင်ဖတ်ရှုထားတာပါ…
ကျနော်တို့ သိပ်လုပ်လေ့ မရှိပါ… တကယ်ကြိုဖတ်ထားပြီးမှ စာသင်ခန်းဝင်ရင် သူများထက် ပိုနားလည်လွယ်ပြီး
ကျက်မှတ်ရ ပိုလွယ် မှတ်မိလွယ်စေပါတယ်…။
2. Rensyu ကတော့ အကျက်အဖတ် ဖြစ်ပါတယ်..
3. Fukusyu ကတော့ revision ဖြစ်ကြောင်းပါ ….
ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် အလုပ်ဆိုတာ ဘာမှ မကောင်းပါဘူးဗျာ …
ကျနော် ဆယ်တန်းတုန်းကလည်း ခိုးမချခဲ့ဘူးဗျ ..
အဲဒါ အတည်ပြောတာ ..
ကျကျအောင်အောင်ပေါ့ ။ ရသလောက် ဖြေချလိုက်မယ်။ တစ်ခုမှ မရရင်လည်း ရတဲ့စာကို ရေးဖြေခဲ့မယ်လို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီး ဆယ်တန်း စာမေးပွဲ ဖြေခဲ့တာဗျို့ ။
အခုအချိန်မှာတော့ ဒါဟာ စိတ်ခွန်အားတစ်ခုကို ရစေတာတော့ အမှန်ပဲ။
ဖရဲကတော့ ခိုးချဖို့မပြောနဲ့ အခန်းစောင့်ဆရာမကြည့်နေရင်ကို ဒူးတုန်နေတာဗျ
၁၀ တန်းကိုတော့ ၂ နှစ်ဖြေခဲ့ရတယ်ဗျ
အောင်မြင်ခြင်းရဲ့ အရသာ (၂)မျိုးလုံးကိုခံစားဖူးတယ်။
ဒီနှစ်တွေမလဲ အပြိုင်အဆိုင်ခိုးကူး ကြဦးမှာပါ ။ ဘယ်လို အေ၇းယူမလဲ စောင့်ကြည့်ရမယ် ၊
ကိုနာဂရ ဖြစ်စေချင်သလို ကျောင်းသူားတွေ လိုက်နာဦးမယ် ထင်သေးဘူး ၊
ဦးကျော်ဟိန်းပြောခဲ့သလို “ ၁၀ နှစ် ”
အင်း ခိုးကူးနေကြတာကို အားပေးမယ်ဆိုရင်တော့ စိတ်မကောင်းစရာပါဘဲ။အကိုပြောသလို စောင့်ကြည့်ရုံနဲ့ မပြီးသေးဘူးနော်။
တိကျသေချာတဲ့ သတင်းမျိုးနဲ့ အရေးယူနိုင်အောင် ကြိုးစားရမယ်။နောင်(၁၀)နှစ်မဟုတ်ပါဘူး။ဖြစ်ချင်ရင် ခုစလုပ်ကြည့်နိုင်တာပါ။
ရှေ့က လုပ်လေ… နောက်က လိုက်ခဲ့မယ် ..
ဒါနဲ့ ဘယ်လို လုပ်မလဲ သင်းတို့ကို
မောင်သန်းထွဋ်ဦး /အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ says:
သန့် ရှင်းသော စာမေးပွဲဖြစ်လာဖို့ ဝိုင်းဝန်းကြိုးစားပြီး ပညာရေးဝန်ထမ်း
တွေနဲ့ ကြိုးစားဖို့ အခြေခံပညာကို သတင်းပို့ မယ်။ဆွေးနွေးအကြံတောင်း
မယ်ဆိုရင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အသေးစိတ်ကို မေးလ်မှာပြောတာပေါ့။စိတ်ပါဝင်စား
တယ်ထင်လို့ နော်။000000@gmail ကအကိုမေးလ်ဟုတ်တယ်နော်။
ကွယ်.. သများဟာကို သိနေပြန်ပါပီ .. တိုးတိုးပြော …
သများက နောက်က လိုက်လိုက်နေကျမို့ပါ .. စိတ်ပါတယ် .. မရဲဘူး
မေး မှာ မပြောနဲ့ သများက ရှက်တတ်တယ် .. ခိခိ …
နောက်လိုက်တာပါကွယ်။စိတ်မဆိုးပါနဲ့ ။အဲလောက်တောင် ရှက်တတ်တယ်ပေါ့။
But….. It was changed by long time especially after 1988.
So….. could not get back easily in short time.
You must prepare to reconstruct the damaged/wrong Education system which was systematically destroyed by the military government.
We must try our best for our mother land and especially for our next generation.
The unity is essential and the most important.
I do admire you for your post created by your heart.